Jennie ကို အချိန်တိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ Lisa ရဲ့ ချစ်စဖွယ်အခိုက်အတန့် (၈) ခု
အချေမလေးဆိုပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ Jennie ဟာ အပြင်ပန်းမှာ အမိအမိုက်ဆုံးနေ‌,နေပေမဲ့လည်း အတွင်းစိတ်လေးက နူးညံ့ပြီး ကြောက်လည်းကြောက်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုကောင်မလေးကို အဓိက, အမြဲတမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေခဲ့သူလေးကတော့ Lisa လေးပါပဲ။
ထင်သာမြင်သာနေရာတွေမှာလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတတ်ကြသလို၊ သေးသေးလေးကအစ အပြန်အလှန်လည်း အားပေးဖေးမရင်း ဂရုစိုက်တတ်ကြပြန်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Jennie လေးလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်း ပြောစရာမလိုဘဲ အလိုက်တသိနဲ့ ဂရုစိုက်ပေးတတ်တဲ့ Lisa လေးရဲ့ ချစ်စရာအခိုက်အတန့် (၈) ခုကို အားလုံးကြည်နူးရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. အသံကျယ်ကြီးတွေကြောင့် Jennie ရဲ့ နားလေးကို အုပ်ပြီး ကာပေးလိုက်တဲ့ Lisa
2. လေဆိပ်မှာ Jennie မှီခိုလို့ရအောင် ‌အရှေ့ကနေ ဒိုင်းကာကြီးတစ်ခုလိုမျိုး ကာကွယ်ပေးလိုက်ခြင်း
3. Jennie ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ တစ်ခုခုကပ်နေတာကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ‌ဖယ်ပေးနေခြင်း
4. တိုလွန်းလှတဲ့အဝတ်အစားကြောင့် Jennie တစ်ယောက် မလုံမလဲဖြစ်နေချိန်မှာ စိတ်လုံခြုံသွားအောင် ကာပေးလိုက်ခြင်း – Lisa ကတော့ ဒီလိုလေး ကာပေးတာကို တစ်ကြိမ်ထက်မနည်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး Jennie လေး စိတ်သက်သာရာရသွားအောင် လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်
5. စင်မြင့်လှေကားထစ်ကနေ ဆင်းလာတဲ့ Jennie ကို လက်လေးကမ်းပြီး ဖေးမလိုက်ခြင်း
6. စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် Jennie ကို သူမလက်မောင်းလေးအား ဆုပ်ကိုင်ထားစေပြီး စိတ်ငြိမ်သွားအောင် ဂရုတစိုက်နဲ့ ကာကွယ်ပေးခြင်း – Jennie အတွက်တော့ Lisa နဲ့ရှိချိန်တိုင်းဟာ စိတ်လုံခြုံပြီး သက်သာရာရစေတဲ့အပြင် Lisa ကိုလည်း သူမအတွက် “အလုံခြုံဆုံး နားခိုရာ” အဖြစ် အားကိုးပုံပါပဲ။
7. Jennie တစ်ယောက် စိတ်ထိခိုက်ပြီး နေရထိုင်ရခက်တိုင်း သူမအတွက် ဘေးမှာအမြဲရှိနေကာ အားပေးနေခဲ့ခြင်း
8. အင်တာဗျူးတွေဖြေတဲ့အချိန်တိုင်း Jennie ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးလှနေစေဖို့ အမြဲ‌ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
ဒီအခိုက်အတန့်လေးတွေကတော့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Jennie နဲ့ Lisa လေးတို့ရဲ့ ချစ်စရာအချိန်လေးတွေပါပဲ။ မတောင်းဘဲ ပေးထားတဲ့ Lisa ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေ၊ အလိုက်တသိအပြုအမူလေးတွေနဲ့ နွေးထွေးကြင်နာမှုလေးတွေဟာ Jennie လို အချေကောင်မလေးအတွက်တော့ တကယ်ကိုကြည်နူးစရာပါပဲ။ နောင်အနာဂတ်မှာလည်း Jennie နဲ့ Lisa ကြားက ကြည်နူးစရာအခိုက်အတန့်လေးတွေကို အများကြီးမြင်ချင်ပါသေးတယ်။
Next ARMY ​တွေ ​ရှေ့မှာ အ​ဖျော်​ဖြေချင်ဆုံးသီချင်းကို ​​ရွေးချယ်ပြောပြခဲ့တဲ့ အငယ်​ဆုံးလေး Jungkook »
Previous « Kimmy ကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Mark Prin
မျိုးဆက်သစ်, စင်ပြိုင်တွေအဖြစ် ထိုင်းအနုပညာလောကကို ကြီးစိုးနေကြတဲ့ မင်းသမီး (၁၀) ဦး
Street Woman Fighter ပြိုင်ပွဲဝင် “Want” အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Hyojin Choi လေးစားရတဲ့အကအတော်ဆုံး idol (3) ယောက်
BTS အဖွဲ့ရဲ့ စစ်မှုထမ်းတာဝန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ​မနက်ဖြန် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက ညီလာခံမှာ ​ဆွေး​​နွေးသွားမည်
Jonghyun စျာပနပုံကို photoshop လုပ်ပြီး သီချင်း promote လုပ်ဖို့ သုံးခဲ့တဲ့ Oliver Tree ကို K netizen တွေ ဒေါသထွက်နေကြ